I-Donald Trump Edition ekhethekileyo nguAdolf Hitler's Mein Kampf
19. October 2016 Oliver Bienkowski
Iposi ekhuniweyo By Oliver Bienkowski On 19. October 2016
Iingcamango zeMein Kampf ziphinda ziphinde zithathele amawaka ngamazwi
Igalari yezithombe zamaphepha eendaba
Iingxelo zeVidiyo kwi-rediyo kunye nomabonakude
Ukuxhasa yethu ikampu
Senze inguqulelo entsha ka-Adolf Hitler “Mein Kampf” noDonald Trump njengomlinganiswa ophikisayo - ngokutshintshisa amawaka amagama kwincwadi endala. Imbali ngoku ebaliweyo ilandela indlela kaTrump ukusuka kumntwana omncinci eNew York ukuya kusomashishini osomeleleyo waseMelika kunye nezopolitiko. Kweli bali lingqinelanayo, uTrump uqala ukubhukuqa emva konyulo luka-2016, ngokufana nolo luka-Hitler's Feldherrenhallen coup eMunich ngo-1923. Ubanjiwe wathunyelwa kwintolongo yezokhuseleko, uninzi lwabalandeli bakhe beRiphabliki bawela phambi kweCapitol kunye ne-White House .. iseka i-American Nationalist Party, esekwe kwizimvo zokuhlanjululwa ngokobuhlanga nangokwenkolo, ukudala intshaba kubantu baseMexico, amaSilamsi kunye nabani na osoyikisayo umbono wabo wobuzwe.
Injongo yokubhala uhlobo olutsha lwe "Mein Kampf" ngokwembono kaTrump yayikukwazisa ngokufana kwezimvo eziqhubela phambili uTrump noHitler. Lixesha elahlukileyo (1930s vs namhlanje), ilizwe elahlukileyo (iJamani kunye ne-United States), kunye notshaba olwahlukileyo (amaJuda namaSilamsi), kodwa iikhonsepthi ziyafana. UTrump sele esinike ukuqonda ngobungozi kulawulo lwakhe olunokubangela i-US kunye nehlabathi ngeentetho zakhe kunye neetweets.
UMongameli waseMelika unamandla amakhulu kunye nefuthe kungekuphela kwabemi baseMelika, kodwa kubo bonke abantu abakwiplanethi. Ubongameli bukaTrump bunokuphawula ukuqala kwethambeka elimtyibilikayo lobuhlanga kunye nokucalula into embi esingenakucinga ngayo. Ukuba olu hlobo luhlaziyiweyo lwe "Mein Kampf" lunokuqaqambisa ukufana phakathi kukaTrump noHitler, ke uPixelHELPER ukwazile ukuhambisa isilumkiso esibalulekileyo kubantu baseMelika.
Intengo kwi-Amazon yi-0.99 $, wonke umntu uyayifumana incwadi evela kuthi ibe ngumnikelo ongokomfanekiso. Yonke inzuzo iza kuphulo lwamalungelo oluntu kunye neziganeko zobugcisa eziqhutywa yiPixelHELPER. Emva komnikelo, siyakuthumela incwadi kwi-format ye-epub nge-imeyile. Nceda faka idilesi yakho ye-imeyile kunye nomnikelo wakho. Ungayilanda kwakhona phantsi:
I-PixelHELPER I-Collective Collective, i-minority non-profit entity and human rights organization ephefumlelwe yiminqweno ye-Freemasons. Ingaphepheli ngxolo yehlabathi, sihamba ngendlela yethu, sizolile kwaye sikhuselekile, sinoyiki engozini, iinjongo eziphezulu engqondweni ukukhusela umhlaba.
Ibhanki: iBhanki ye-GLS yoluntu
Umgcini we-Akhawunti: Inhlangano ye-PixelHELPER engeyiyo inzuzo
Ngolwazi oluthe kratya: https://PixelHELPER.org
[gallery_bank type = "imifanekiso" format "" masonry "title =" true "desc =" false "responding =" true "display =" selected "no_of_images =" 13 ″ sort_by = "random" animation_effect = "bounce" album_title = " eyinyani "i-albhamu_id =" 7 ″]
IiVideos zeeNkampu kunye neeVideos zikaTV | Deutsche Welle |
Ukufakela ukukhanya kwiChansela yaseStellery ukusuka kwibhasi ye-double-decker
Nceda wabelane ngeeprojekthi zethu kuFacebook nakwiTwitter! Ukuba uyayixhasa injongo yethu, singavuya ngawo nawuphi na umnikelo ukuze siqhubeke namaphulo ethu ngokusisigxina.
Nama-euro ambalwa enza umehluko! Ukwabelana kukunyamekela. Nceda usixhase umsebenzi wethu. Nceda sebenzisa i-Paypal, i-Betterplace, i-Indiegogo okanye i-classical transfer.
Ibhanki: i-Sparkasse Magdeburg
Umnikazi: I-PixelHELPER Foundation engekho inzuzo GmbH
►Indawo engcono https://www.betterplace.org/de/projects/41782
Ifomu yokunikela ngendawo
Nika ngoku ngoku "Sibonakaliso ngokusisigxina sePielelHELPER Foundation" kwiqabane lethu elingcono kwi -placeplace.org
I-Donald Trump Edition ekhethekileyo nguAdolf Hitler's Mein Kampf Oktobha 23rd, 2016Oliver Bienkowski